Deepa Poudel, Author at देश विकास डटकम
धुर्मुस सुन्तलीले भने, रवि लामिछानेको साथमा हामी छौँ
काठमाडौं, ७ असार । मिडियाकर्मी रबी लामिछानेसँग अमेरिकी नागरिकता रहेको खबर सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थन र विरोधमा समाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । उनका धेरै समर्थकले उनको बचाउ गर्दै प्रेस काउन्सिलको आलोचना गरेका छन् । हास्ँय कलाकार धुर्सस सुन्तलीले (सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरे) पनि रविको समर्थनमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राखेका
राजविराज, १ असार । सप्तरीको राजविराजमा कुटपीट गरेर एक युवकको हत्या गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले युवकका ससुरासहित तीनजनालाई विहीबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा राजविराज नगरपालिका–९, मलेठ निवासी रामदयाल साह, उनका २५ वर्षीय छोरा जयप्रकाश साह र छोरी अन्जना साह रहेको सप्तरीका प्रहरी उपरिक्षक मुकेशकुमार सिंहले वताउनुभयो । दुई दिन अगाडि रामदयाल साहले आफ्नै
सातै प्रदेशको बजेट आज, कुन प्रदेशको बजेट कति ?
काठमाडौं, असार १ । सातै प्रदेशका सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट ल्याउँदै छन् । प्रत्येक प्रदेशको संसदमा पेश गरिने बजेटमा विकास निर्माण र संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरुले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक,
ट्रम्प फाउण्डेशनले मिच्यो कानुन, फाउण्डेशन विरुद्ध अभियोग
एजेन्सी । अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यले राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा परोपकारी संस्थाले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कानुन मिचेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता बार्बरा अन्डरवुडले ट्रम्प फाउन्डेशनले डोनल्ड ट्रम्पको तर्फबाट “लगभग चेकबुकको जस्तै काम गरेर“ विभिन्न व्यवसाय र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कानुनको बेवास्ता गर्दै जथाभाबी रकम तिरेको आरोप लगाएकी विविसीले जनाएको छ ।
ट्रकको ठक्करबाट चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १ असार । चितवनमा ट्रकको ठक्करबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराबाट काठमाडौंका लागि छुटेको जाँदै गरेको माइक्रोबसलाई काठमाडौंबाट छुटेकोे ट्रकले ठक्कर दिँदा चार जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा चार जना गम्भीर घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको उपचार भइरहेको छ । ना ६ ख ४०६४ नम्बरको ट्रकले ग १ ख
ज्वालामुखी बिस्फोट हुँदा सातजनाको ज्यान गयो, १० लाख मानिस प्रभावित
एजेन्सी । ग्वाटेमालामा ज्वालामुखी बिस्फोट हुँदा सातजनाको ज्यान गएको छ । फुएगो ज्वालामुखी बिस्फोट हुँदा झण्डै ३ सय जना घाइते भएको सरकारी अधिकारीलाई उदृत गर्दै विविसीले जनाएको छ । ज्वालामुखी बिस्फोट हुन थालेपछि वरपरका ठाउँबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । राजधानी ग्वाटेमाला सिटीबाट झण्डै ४० किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा रहेको फुएगो ज्वालामुखीबाट कालो धुवाँ र खरानी
काठमाडौं, १९ जेठ । सुवासचन्द्र ढुंगेल भन्ना साथ सम्झने गीत हो ‘चोट के हो व्यथा के हो म जस्तो घाइतेलाई सोध … ।’ धेरैजसोको मन मस्तिष्कमा बसेको यो गीत नसुन्ने सायदै कम होलान । गीतमा मात्र होइन साहित्यमा समेत कलम चलाउँदै आएका ढुंगेलले शुक्रबार मुक्तक वाचन गरिरहदा उपस्थित साहित्यकार, कवि एंव दर्शकको तालिले हल गुन्जिएको
काठमाडौं, १८ जेठ । गायिका अन्जु पन्तको नयाँ गीत सार्बजनिक भएको छ । बिजया गुरुङ्गको शब्द अनि अहिलेका चर्चित संगीतकार बिनोद पछाईको संगीतमा रहेको गीत ‘तिम्रा हजार गल्तीलाई’ बोलको म्युजिक भिडियो सांगीतिक बजारमा आएको छ । पछिल्लो समय आफ्नो निर्देशकीय कौशलबाट दर्शकको मन जितेका निर्देशक निशान घिमिरेले भिडियोको निर्देशन गरेका हुन् । उनलाई क्यामेरामा अर्जुन
सलादबाट फैलियो संक्रमण, पाँचजनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकामा इ. कोली महामारीका कारण पाँचजनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिका ३५ राज्यमा १९७ जनामा संक्रमण रहेको पुष्टि भएको विविसीले जनाएको छ । रायो साग जस्तै देखिने रोमेन लेटेकामा रहेको इ. कोली ब्याक्टेरियाका कारण संक्रमण फैलिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर अहिलेसम्म संक्रमणको स्रोत स्पष्ट भएको छैन । यो साग सलादको रुपमा प्रयोग
उपचार पछि राष्ट्रकवि स्वदेश फर्किदै, स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौं, १९ जेठ । उपचारका लागि भारत जानु भएका राष्ट्र कवि माधवप्रसाद घिमिरे शनिबार स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उहाँलाई थप उपचारका लागि गएको ९ गते भारतको मेदान्त अस्पातलामा लागिएको हो । आन्तरिक रक्तस्राव नरोकिएपछि उहाँलाई चिकित्सकको सल्लाहमा भारत लगिएको हो । उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएका परिवारले बताएका छन् । पारिवारका अनुसार उहाँ